खेलकूद Archives - Page3of 11 - Sudur Khabar
धनगढी रंगशालामा भएको खेलमा भारतको पञ्जाव ११ लाई ५–०......
विश्व नम्बर एक मुर्रे हारे, उपाधि जोकोविचलाई
काठमाण्डौ, पुस २४ । कतार ओपन टेनिसको उपाधि नोवाक जोकोविचले जितेका छन् । विश्व नम्बर एक बेलायती एण्डी मुर्रेलाई फाइनलमा ६–३, ५–७ र ६–४ को सेटमा हराउँदै दोस्रो बरियताका जोकोविचले उपाधि जितेका हुन् ।
सर्बियाको जोकोविचले मुर्रेको लागतार २८ खेलदेखिको विजयी यात्रा पनि टुंग्याएका छन् । दुवै खेलाडी जनवरी १६......
सागर पुनलाई कञ्चनपुर आइकोनिकले अनुवन्धित गरेको छ भने मेहबुब आलम र करण केसीलाई सीबाईसी अत्तरिया र......
सुदूर खबर, सीताराम ओझा, कैलाली, पुस २३ । भारतको दिल्ली युनाईटेड धनगढीमा जारी भागेश्वर गुप्र सुदुरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको क्वाटरफाईनलमा पुगेको छ । शनिबार धनगढी रंगशालामा भएको खेलमा काठामण्डौको व्वाईज युनियनलाईलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ४–२ ले हराउदै अन्तिम आठमा पुगेको हो । निर्धारित समयसम्म दुवै टीमले......
धनगढी प्रिमियर लिगः कुन टिममा को-को छन् खेलाडी ? कसमाथि लाग्यो कति बोली ?
२३ पुस, काठमाडौं । धनगढी प्रिमियर लिग (डीपीएल)को छ टिमका लागि शनिबार अक्सन भएको छ । र, चार क्रिकेटरमाथि अधिकतम १ लाखको बोली लोगेको छ ।
धनगढी टिमको कप्तान पारस खड्का छन् । उनको टोलीमा अनित मण्डल प्रेम तामाङ, पृथु बास्कोटा, रिजु रिजाल, आरिफ शेख जस्ता क्रिकेटर छन् । ज्ञानेन्द्र मल्ल कप्तान रहेको सीबाईसी......
विराट कोहली भारतीय टिमको कप्तानमा नियुक्त
काठमाण्डौं, पुस २३ । विराट कोहली सीमित ओभरको क्रिकेटको भारतीय टिमको कप्तानमा नियुक्त भएका छन् ।
महेन्द्र सिंह धोनीले एक दिवसीय तथा ट्वेन्टी–ट्वेन्टी क्रिकेटको कप्तानबाट राजीनामा दिएपछि कोहलीको कप्तानीमा भारतीय टोली इंग्ल्याण्डसँग खेल्ने भएको हो ।
सन् २०१४ देखि टेस्ट कप्तान रहेका कोहलीको......
५-० ले हरायो म्यानचेस्टर सिटीले वेष्ट ह्यामलाई उसकै मैदानमा
काठमाडौं, पुस २३ । एफए कप अन्तर्गत म्यानचेस्टर सिटीले तेस्रो चरणको पहिलो लेगमा प्रभावशाली जित दर्ता गरेको छ । शुक्रबार राति भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले वेष्ट ह्यामलाई उसकै मैदानमा ५-० ले हराएको हो । सिटीले पहिलो हाफमा ३-० को अग्रता लिएको थियो ।
सिटीलाई जिताउन याया टुरे, डेविड सिल्भा, सर्जियो अग्युरो......
सुदुरपश्चिम खप्तड गोल्डकप : काठमाण्डौँ डकस्टारसँग पराजित
सीताराम ओझा/सुदूर खबर
कैलाली, पुस २२ । कैलालीको धनगढीमा जारी प्रथम अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रित भागेश्वर गुप्र सुदुरपश्चिम खप्तड गोल्डकपको शुक्रवार भएको खेलमा भुटानको डकस्टार फुटवल क्लव विजयी भएको छ । धनगढी रंगशालामा दिउसो भएको खेलमा डकस्टारले वेष्ट काठमाण्डौलाई ४—१ ले पराजित गर्दै दोस्रो चरणमा......
काठमाडौं, पुस २२ । इङ्लिस एफए कप फुटबल प्रतियोगिताको तेस्रो चरणका खेल आजबाट हुँदैछन् ।
इङ्लिस प्रिमियर लिग फुटबलका आधा खेलहरु सकिएपछि एफए कपका मुख्य खेल सुरु हुने व्यवस्था छ । एफए कपका सुरुवाती खेल यसअघि नै भए पनि प्रिमियर लिगका क्लबहरु भने तेस्रो चरणबाट मात्रै यो प्रतियोगितामा सहभागी हुन्छन् ।......